Ngabe Imizamo Yokukhangisa Ngezenhlalo Yenkampani Yakho Iyokhokha?
Kuleli sonto, iklayenti esibonisana nalo belibuza ukuthi kungani okuqukethwe abebesebenza kanzima kangaka kungabonakali kwenza umehluko. Leli klayenti alisebenzelanga ukuthuthukisa okulandelayo ekuxhumaneni nomphakathi, esikhundleni sokusebenzisa imizamo yabo eminingi ekumaketheni okuphumayo.
Sibanikeze isifinyezo sobungako bezithameli zabo ezinkundleni zokuxhumana uma kuqhathaniswa nalabo abancintisana nabo - sabe sesinikeza umthelela owaba nawo endleleni okwabiwa ngayo okuqukethwe yimbangi. Izinombolo zinkulu… ukuthi ukukhuliswa kwezithameli eziningi ezinkundleni zokuxhumana kugwinya cishe wonke umuntu osemkhathini. Ukuze sincintisane nokuqukethwe, iklayenti lethu kufanele lincintisane nasezinkundleni zokuxhumana, futhi!
Ukuze uphumelele ekumaketheni ibhizinisi lakho ezinkundleni zokuxhumana, udinga ukutshala isikhathi nezinsizakusebenza. Lesi sihlahla sezinqumo sikusiza ukuthi ubone ukuthi usukulungele yini ukuqala umzamo wezindaba zenhlalo ngokugcwele ozoholela ekunakekelweni nasekuholekeni kwebhizinisi.
Kulezi zinsuku, ngingahle ngingeze umbuzo owengeziwe futhi ukuthi ungakwazi yini ukukwazi ukukhuthaza okuqukethwe kwakho ezinkundleni zokuxhumana ngokusebenzisa amaphrofayili nokuqukethwe okwenziwe. Uma uyinkampani yethula nje imizamo yakho yezokuxhumana, ungathola ukuthambeka ngokushesha ngokutshala imali ekwakheni izithameli zakho ngokushesha.
Inenhlanhla ngawe, i- amapulatifomu ezokuxhumana unamathuluzi amahle namathuba wokukhomba wokwenza lokho nje. Ezingxenyeni ezinjenge-Facebook, ungathola ngisho nokudonswa okungcono ngokuqukethwe okuphakanyisiwe kunokuba nje ngekhasi lenkampani yakho.
Ukudalula: Ngisebenzisa eyethu Qhwa isixhumanisi sokusebenzisana.
Tags: umuthi wesinqumoumkhakhabuyela kutshalomaliRIOsocial mediaokuqukethwe ezokuxhumukuguqulwa kwemithombo yezokuxhumanaukugxekwa ezinkundleni zokuxhumanaukupheliswa kwezokuxhumanaizinkundla zokuxhumana isinqumo somuthiukuzibandakanya kwezokuxhumanaimithombo yezokuxhumanaukubuya kwezokuxhumana ekutshalweni kwemaliizinkundla zokuxhumana roiukwabelana ngezokuxhumanaamasu ezokuxhumana nabanturoi yomphakathi